नेपाल बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २३ पुस २०७६)
यस वर्ष बैंकले शेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस शेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव पारितका लागि कम्पनीले पुस २५ गते साधारणसभा आयोजना गर्दैछ । पुस १० गतेसम्म शेयर कायम गरेका शेयरधनीले उक्त लाभांश पाउनेछन् । कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमासमा रू. ५८ करोड १८ लाख नाफा कमाएको छ ।
यो नाफा गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा ३६ प्रतिशत कम हो । सो अवधिमा कम्पनीले रू. ९१ करोड ३८ लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको चूक्तापूँजी रू. ९ अर्ब ८१ करोड छ । जगेडा कोषका लागि रू. १३ अर्ब २५ करोड छुट्याएको छ । प्रतिशेयर आम्दानी रू. २३ दशमलव ७२ छ । मंगलवार कम्पनीको शेयरमूल्य रू. २७५ कायम भएको छ ।
2020-01-08 - 558 view(s) - abhiyandaily